प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रायमाझी बीच संविधान संशोधन प्रस्तावबारे घोचपेच | Hakahaki
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रायमाझी बीच संविधान संशोधन प्रस्तावबारे घोचपेच
बाबुरामजीले पनि संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभएको छ – प्रचण्ड
त्यही भएर मैले बाबुराम छाडेको – रायमाझी
१८ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता टोपबहादुर रायमाझी बीच संविधान संशोधन प्रस्तावको बारेमा घोचपेच भएको खबर छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा शुक्रवार बुटवलमा ठूलो जनसहभागिताका बीच ५ नम्वर प्रदेश टुक्राउन हुँदैन भन्दै संशोधनका विपक्षमा रहेकाहरुले जनसभा कार्यक्रम गरे ।
उक्त जनसभालाई एमाले, कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरुले सम्बोधन गरेर जनताको मागअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै ५ नम्बर नटुक्राउन सरकारलाई खबरदारी समेत गरे ।
बुटवलमा भएको जनसभामा सत्ता सञ्चालनमा रहेको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता टोपबहादुर रायमाझी र काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको पनि उपस्थिति थियो ।
पार्टीको वैठकमा मात्र होइन, सडकबाट पनि ठाडै चुनौति
आफ्नै पार्टीका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् र उनकै सरकारले अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । तर, रायमाझीले यसलाई पार्टीको वैठकमा मात्र होइन, सडकबाट पनि ठाडै चुनौति दिए ।
प्रचण्डले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई बाबुरामजीले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभएको छ भन्दा टोपबहादुरले ‘त्यही भएर मैले बाबुराम छाडेको’ भनेर जवाफ दिएका छन् ।
रायमाझीले यतिधेरै जोखिम किन मोले ?
आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको एजेन्डा ५ नम्वर प्रदेश टुक्राउने गरी आएको संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध उत्रेर रायमाझीले यतिधेरै जोखिम किन मोले ? साथै, प्रचण्डलाई यो प्रस्तावमा ‘मुभ’ गर्न पार्टीभित्रबाट कसले उचालेको छ ? भन्ने प्रश्न माओवादी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
विगतमा मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ वा रामबहादुर थापा बादलहरुले राख्ने फरक मत अहिले माओवादीमा रायमाझीले शुरु गरेका छन् ।
टोपबहादुर रायमाझी केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहेका थिए । तर, बर्षमान पुन चाहिँ ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनको सूत्रधार थिए भने कृष्णबहादुर महरा अहिलेको मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्र ।
‘प्रचण्डले विश्वास गरेर, पुनसहित केही नेतालाई आफ्नो नेतत्वको सरकार गठनका लागि परिचालन गरेका थिए’ पत्रकार नेत्र पन्थीले लेखेका छन्, ‘बाबुरामले सम्बन्ध–विच्छेद गरेर जाँदा पनि माओवादी नछाडेका टोपबहादुरले उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुनको मात्र कुरा सुनेर मात्र अगाडि बढ्न त्यति सहज छैन ।’ भन्ने सन्देश दिएको हुनुपर्छ ।
पन्थीले अघि लेखेका छन्, ‘टोपबहादुरको पछिल्लो कदमलाई माओवादीभित्र दुई कोणबाट हेरिएको छ । एउटा उनले पार्टी नीतिलाई चुनौति दिए र अनुशासन मिचे । अर्को, उनले जनताको भावना अनुसार आफुलाई ढाले र अर्को चुनावको तयारी गरे । यहाँ अर्कोपक्ष के देखिन्छ भने, बुटवलमा जुन खालको सहभागितासहित जनसभा भयो, त्यसको सम्पूर्ण लाभ र सेन्टिमेन्ट एमालेले लिने सम्भावना थियो । तर, टोपबहादुर र चन्द्र भण्डारीले त्यसलाई रोके । सायद, अव हुने चुनावको बेला माओवादी र काँग्रेसका मूल नेतृत्वले यसलाई महसुस गर्न सक्छ ।’
महरा र पुन प्रचण्डले अगाडि सारेको प्रस्तावको बचाउमा किन देखिएनन् ?
‘तर, अचम्म प्रचण्डसँग सवैभन्दा नजिक बसेर संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन भूमिका खेल्ने महरा र पुन चाहिँ अहिले मौन छन्’ भन्दै पत्रकार पन्थीले महरा र पुनलाई प्रश्न समेत गरेका छन्, ‘आफ्ना एजेन्डा लिएर उनीहरु विवादित जिल्लामा किन गएनन् ?’
प्रचण्डले पनि सोचेका होलान भन्दै पन्थीले माअ‍ोवादी केन्द्रका केही नेतासँग गरेको कुराकानीका क्रममा ‘संविधान बन्ने बेला सात प्रदेशको खाकामा असहमति गरेर विजातीय शक्तिसँग गठबन्धन बनाउने बर्षमान अहिले प्रचण्डले अगाडि सारेको प्रस्तावको बचाउमा किन अगाडि देखिएनन् ? भन्ने प्रश्न केही नेताहरुले उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।